mercredi, 22 juillet 2020 10:34
Loharanom-baovao: Ministeran'ny Fiarovam-pirenena
Hôpitaly Miaramila Soavinandriana: Marary Covid-19 miisa 29 no tsaboina ao ankehitriny
Araka ny fampitam-baovao nataon’ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena dia marary mitondra ny tsimokaretina Covid-19 miisa 29 ankehitriny no tsaboina eo anivon'ny Hôpitaly Miaramila Soavinandriana. « 19 no mampiseho sori-traretina misy fahasarotana ary mampiasa fitaovana fampisefoana » raha ny fanazavana nomen'ny Dokotera Kolonely Tovone Myriame. Miasa andro aman'alina ireo dokotera miaramila miisa 2 sy mpitsabo mpanampy 4 ary mpikarakara 2 izay mifandimby manara-maso tsy an-kiato ny fivoaran'ny toe-pahasalaman'ireo mararin'ny Covid-19. Maimaim-poana ny fitsaboana ary ny hôpitaly no miantoka ny fanafody hitsaboana araka izay misy ao aminy. Mandray an-tanana feno sy mitsabo tanteraka ireo mararin'ny Covid-19 ahitana sori-traretina efa misy fahasarotana ity hôpitaly miaramila ity. (Loharanom-baovao: Ministeran'ny Fiarovam-pirenena)
Nohanatevin’ny Tahirimbolam-panjakana ny isan’ireo Polisy izay misahana ny fahandriam-pahalemana, ny fandraisana, ny fanampiana ary ny fandaminana eny anivon’ny Paierie Générale d’Antananarivo (PGA) amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Ny tanjona dia ny mba hanomezana fahafaham-po ireo Zokiolona sy ny mba ahafahana manaja ireo fihetsika rehetra hanakanana ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19, indrindra fa mandritra ireo dimy andro voalohany ny fizarana fisotroan-dronono, fotoana izay mahabetsaka ny olona. Marihina fa efa nisy hatramin'ny ela ny fiaraha-miasa eo amin'ny Tahirimbolam-panjakana sy ny Polisy amin'ny fiarovana ny toeram-piasana sy ny fandaminana ihany koa ireo Zokiolona sy ireo mpisitraka. (Jereo Sary Tohiny)
Napetraka ny 15 Jolay 2020, tao amin'ny Kaominina Beraketa, Faritra Androy ny vatofototra ho fanombohana ny asa fanamboarana ny tohadrano lehibe, izay hanondraka velarantany mirefy 180 ha. Telo volana ny faharetan'ny asa, ary mitetim-bidy 800 tapitrisa Ariary ny fanorenana ity tohadrano ity, izay amin'ny alalan'ny fandaharasana Defis eo anivon'ny Ministeran'ny fambolena, fiompiana ary ny jono.
Tonga teny amin’ny Foibem-pibaikoana ny Covid-19 na CCO Ivato ny sabotsy 18 jolay 2020 ireo mpianatra amin’ny lalampiofanana farmasia eny amin’ny fakiolte sampana fitsaboana Oniversite Antananarivo. Nanolotra « solution hydroalcoolique » 2080 tavoahangy izy ireo, ho anjara biriky hifarimbonana amin’ny ady amin’ny Covid-19. Vokatra novokarin’ny mpianatra ihany ity natolotr’izy ireo ity. Nanotrona izany hetsika izany teny Ivato ny Sojaben’ny fakiolte sampana fitsaboana Oniversite Antananarivo, ny mpandrindra ankapobe ny CCO, ny Tale jeneralin’ny « Agence universitaire Francophone AUF », ary mpianatra sy ny mpampianatra. (Jereo Sary Tohiny)
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy androany 10 jolay 2020 ny « Centre de Traitement Covid-19 » na CTC-19 etsy amin’ny Mining Business Center Ivato. Tonga nijery izany teny an-toerana ny Filoha Andry Rajoelina mivady sy ny mpikambana vitsivitsy ao amin’ny governemanta notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian. Afaka mandray marary eo amin’ny 400 ity CTC-19 ity, ary natokana ho an’ireo marary ahitana ny soritr’aretina Coronavirus, fa indrindra ireo “formes graves”. Misy mpiasan’ny fahalasamana miisa eo amin’ny 55 ihany koa ao an-toerana hanatanteraka ny fandraisana an-tanana ireo marary. Nanambara ny Filoham-pirenena fa hisokatra tsy ho ela ny ivon-toerana tahaka ity ao amin’ny LTP Alarobia sy eny amin’ny « bâtiment annexe » lapan’ny Fanatajahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Ireo ivon-toerana ireo moa dia afaka handray olona marary miisa eo amin’ny 300 avy.
Resy lahatra ny rehetra fa arakaraky ny mahaingana ny fitiliana ireo mitondra ny tsimokaretina Covid-19 no ahafahana manoka-monina na mitsabo aingana ireny olona voa ireny. Mananosarotra anefa ny fanaovana fitiliana, ary izay voatily ka tsy mitondra aretina androany, mety rahampitso ihany dia efa misy indray, eny na ireo efa sitrana aza dia mety mbola hiverenany. Ny cancer na homamiadan'ny nono, prostate, colon dia manampy betsaka ny alika, ary nahitam-bokatra 90% ny fitiliana ataon'ny alika. Misy karazan'alika tokoa tena manana talenta mamantatra fofona maromaro, ary hainy ny manavaka izany. Efa mahazatra antsika ohatra ny mahita alika mpitsongo dia, izay ampiasain'ny Zandary mitady mpangalatra nandalo teo amin'ny toerana iray, ampiasaina hikaroka vola anaty entana eny amin'ny seranam-piaramanidina, ampiasaina hitady zava-mahadomelina, ampiasaina hitady baomba.
Le Centre Médical Covid-19 (CMC) a officiellement ouvert ses portes au Village Voara Andohatapenaka ce 1 juillet 2020. Il s'agit d'un centre médical mis en place par l'État malagasy pour améliorer la prise en charge et le dépistage des cas liés au Covid-19. Le CMC accueillera désormais les personnes présentant des symptômes liés au coronavirus. Des dépistages massifs y seront effectués tous les jours. Accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, du Premier ministre Ntsay Christian et de quelques membres du gouvernement lors de cette cérémonie, le Président Andry Rajoelina a donné des consignes fermes pour que les résultats des tests soient obtenus dans un délai maximum de 72h. Le CMC a également été aménagé afin d’accueillir et soigner les patients testés positifs au Covid-19. Des mesures strictes ont été prises par le Ministère de la Santé publique afin de respecter les normes sanitaires requises pour protéger à la fois les patients et les agents de santé.
jeudi, 02 juillet 2020 21:00
Hery Frédéric Ranjeva: Isan’ireo Mpisolovava ikoizana any Frantsa
Isan-taona ny revio amerikanina momba ny fitsarana « The Best Lawyers » dia mandahatra sy manasokajy ireo Mpisolovava ao Frantsa araka ny fahaizany sy ny zava-bitany. Fifidianana ataon’ireo Mpisolovava no andaharana azy ireo. Isan’ireo Mpisolovava misongadina any Frantsa ho an’ny taona 2021 i Hery Frédéric Ranjeva, zanaky Pr Raymond Ranjeva ity farany ary isan’ireo Mpisolovava ao amin’ny « cabinet » Foley Hoag ao Frantsa manana traikefa amin’ny « Arbitrage International ».